I-Little Coombe, i-cottage yasemaphandleni etofotofo ene-Hot tub
I-Little Coombe yenye yee-4 eziqhuba ngokwazo ii-cottages kwiNkundla yaseBookham. Inebhafu eshushu, indawo yomlilo ye-inglenook kunye nekhitshi / amagumbi okuhlambela anamhlanje. Kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye newele le-2 okanye i-zip kunye nekhonkco lokulala, zombini i-ensuite kunye nokulala 4 + ibhedi. Izinja zamkelekile (i-£ 30 ehlawulwayo ekufikeni) kunye nokuhamba okuzukileyo ecaleni kwe-Wessex Ridgeway / Hardy Trail. I-patio yangasese evaliweyo kunye ne-Hot tub, igumbi lemidlalo ekwabelwana ngayo, ichibi kunye nezilwanyana zasendle ezimangalisayo kunye neembono. Isiqingatha seyure ukusuka elunxwemeni. I-fiber wi-fi yasimahla
Kutshanje ihlaziywe kumgangatho ophezulu, i-Little Coombe ilala i-4 enegumbi lokulala eline-ensuite ephindwe kabini kunye ne-zip yesibini kunye nebhedi yekhonkco (inokwenziwa njengewele ngesicelo), enegumbi lokuhlambela le-en-suite. Igumbi lokuhlala elinobuntu elinendawo yomlilo ye-inglenook kunye nekhitshi elitsha langoku. Ipatio yabucala kunye nezolileyo / yokuhombisa ene-Hot tub kaJuni ka-2020, igumbi lemidlalo, ichibi kunye nefama. Kuninzi ekufuneka kwenziwe kwiNkundla yaseBookham
I-TV ene-I-Amazon Prime Video, I-Netflix, intambo yepremiyamu
I-Bookham yindawo ethe cwaka yasemaphandleni phakathi kweDorchester kunye neSherborne apho unokonwabela iimbono zeBlackmore Vale kunye nokuhamba okuzukileyo phezu kwefama yethu kunye namaphandle angabamelwane, kunye nonxweme lwaseDorset lweJurassic kunye neelwandle. Ummelwane waseBuckland Newton unevenkile yelali kunye ne-pub yosapho, iGaggle yeGeese.
Isitshixo socango siya kushiywa kwibhokisi yeSitshixo ngasemnyango wangaphambili ukuze ukwazi ukufika xa ukulungele. Ndizakuhla ndikubone xa sele uzinzile kwaye unokuqhagamshelwa ngalo lonke ixesha. Ndiyavuya ukukunika iingcebiso malunga neendawo zokutyela zasekhaya kunye neendawo onokundwendwela kuzo kwindawo.
Isitshixo socango siya kushiywa kwibhokisi yeSitshixo ngasemnyango wangaphambili ukuze ukwazi ukufika xa ukulungele. Ndizakuhla ndikubone xa sele uzinzile kwaye unokuqhagamshelwa n…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Alton Pancras